Myanmar approves new three insurance policies | Myanmar Business Today
HomeBusinessMyanmar approves new three insurance policies
The Ministry of Planning, Finance, and Industry has issuedanotice on May 12 allowing eight general insurance companies and Myanma Insurance to sell new insurance products across the country namely Industrial All Risk, Construction All Risk/ Erection All Risk, and Baliee’s Liability Insurance.
However, all of these three insurance products are been approved to sell at Thilawa Special Economic Zone. Now, the authority allows insurance companies to sell these products outside the zone as well.
According to the notice, Insurance Companies can sell their products starting from October 1, 2020.
The ministry also issuedaseparate notice on the same days ordering three Tokyo-based insurance companies to halt underwriting new policy from Thilawa special economic zone with effect from October 1, 2020 by maintaining the liabilities for existing insurance policies until ends of their policies’ terms.
Those three companies, namely Sompo Japan Nippon Koa Insurance Inc, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd, and Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd, received Provisional Permit to Operate” in Thilawa Special Economic Zone in 2015.
In November 2019, they were granted Insurance License to operate as Joint Venture General Insurance Companies with local general insurance companies. So, they founded AYA Sompo Insurance Company Limited, Grand Guardian Kokio Marine General Insurance Company Limited, and KBZ MS General Insurance Company Limited.
မြန်မာနိုင်ငံရှိအထွေထွေအာမခံကုမ္ပဏီ (၈) ခုနှင့် မြန်မာအာမခံလုပ်ငန်းတို့ကို သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပါအဝင် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် Industrial All Risk ၊ Construction All Risk/Erection all risk နှင့် Baliee’s Liability Insurance အမျိုးအစားများကို အာမခံအမျိုးအစားများရောင်းချခွင့်ပြုလိုက်ကြောင်း စီမံကိန်း၊ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနက မေလ ၁၂ ရက်တွင် ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ထိုအာမခံအမျိုးအစားများကို ၂၀၂၀ အောက်တိုဘာ၁ ရက်မှ စတင်၍ ရောင်းချခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း စီမံကိန်း၊ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ သိရသည်။
သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်၌ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် အခြေစိုက်သည့် ဂျပန်အာမခံကုမ္ပဏီများဖြစ်သည့် Sompo Japan Nippon Koa Insurance Inc, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd, နှင့် Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd တို့သည် သီလဝါစက်မှုဇုန်တွင် အာမခံဝန်ဆောင်မှုပေးရန်အတွက် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် “အာမခံလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန် ယာယီခွင့်ပြုချက်” ချထားပေးခဲ့သည်။
ယင်းနောက် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် အဆိုပါ လုပ်ငန်းသုံးခုအား နိုင်ငံသားပိုင်အထွေထွေအာမခံကုမ္ပဏီများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ဖက်စပ်အထွေထွေအာမခံကုမ္ပဏီအဖြစ် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ တွင် စီမံကိန်း၊ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပေးခဲ့သည်။ ယင်းလုပ်ငန်းသုံးခုသည့် ပြည်တွင်း လုပ်ငန်းများနှင့် ပူးပေါင်းလျက် AYA Sompo Insurance Company Limited, Grand Guardian Kokio Marine General Insurance Company Limited, နှင့် KBZ MS General Insurance Company Limited တို့ကို သီးခြားစီ တည်ထောင်ခဲ့ကြသည်။
ယခုအခါတွင် သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်တွင် အာမခံများရောင်းချနေသည့် ယင်းဂျပန်ကုမ္ပဏီသုံးခုအား အာမခံအမျိုးအစား (၃)မျိုးကို ရောင်းချခြင်းမပြုကြောင်း စီမံကိန်း၊ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သည်။ ၎င်းတို့အနေဖြင့် လက်ရှိ ရှိရင်းစွဲ အာမခံပေါ်လစီများကို ဆက်လက်တာဝန်ယူသွားရမည်ဖြစ်ပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်မှ စကာ အာမခံပေါ်လစီအသစ်များ လက်ခံဆောင်ရွက်ခြင်း ခွင့်မပြုတော့ကြောင်း ဝန်ကြီးဌာနက ညွှန်ကြားခဲ့သည်။
Previous articleKidney injury seen in more thanathird of hospitalized COVID-19 patients: U.S. study
Next articleThe govt purchases 6,300 tons of reserve rice